သင်တို့သည်ငါတို့၏အသစ်ကက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်သင်၏လိင်စူးစမ်းဖို့အသုံးပွုနိုငျကွောငျးဤမျှလောက်များစွာသောအမာခံညစ်ညမ်းဂိမ်းရှိပါတယ်။ လိင်တူချစ်သူတွေအတွက်ဂိမ်းတွေရှိသလို၊ဗီရိုထဲကနေမထွက်သေးတဲ့သူတွေနဲ့စက်ဘီးသမားတွေအတွက်လည်းဂိမ်းတွေရှိပေမယ့်တချို့လူတွေရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုခံစားချင်နေကြတုန်းပါပဲ။ ဒီဆိုက်မှာရှိတဲ့စုဆောင်းမှုကကွန်ပျူတာရှေ့မှာပျော်စရာကောင်းတဲ့အချိန်ကိုလိုချင်တဲ့အရာနဲ့လာတာပါ။ ငါတို့သည်သင်တို့အစည်းအဝေးများချွတ်တစ်ဦးအမြန်လူရှုပ်ချင်တဲ့အခါအဘို့ကြီးသောဖြစ်ကြောင်းဂိမ်းများ,သင်တို့ရှိသမျှသည်ညဥ့်မျက်နှာပြင်လျှက်ရှိကြောင်းစောင့်ရှောက်ရန်ဂိမ်းများ။, ဒီကေန႔ေခတ္မွာေတာ႔ အင္တာနက္ဆိုတာအရင္ကေပးခဲ႔တဲ႔ အရာေတြထက္အမ်ားၾကီးအဆင့္ျမင့္တဲ႔ ဂိမ္းေတြရဲ႕ မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြကိုေတြ႔လာရပါတယ္။ သူတို့ထဲကတချို့ကဒါလက်တွေ့ကျမယ့်အရေးယူမှုပါရှိပါတယ်,သင့်ရဲ့အကြောငျးကိုသငျသညျကိုမှန်ကန်အသက်တာ၌လိင်ရှိသည့်အခါရုံနဲ့တူခံစားရပါလိမ့်မယ်ကြောင်း.
ပြီးတော့ဒီဂိမ်းအသစ်တွေကအရာရာတိုင်းကိုချောချောမွေ့မွေ့လည်ပတ်စေဖို့တိုးတက်လာတဲ့ဂရပ်ဖစ်နဲ့လှုပ်ရှားမှုအင်ဂျင်တွေထက်ပိုပြီးသွားတဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်။ သူတို့ကအစပြည့်စုံလက်ဝါးကပ်တိုင်ပလက်ဖောင်းလိုက်ဖက်တဲ့နှင့်အတူလာကြ၏။ ဒါကနေပါစေသင်အွန်လိုင်းအရွယ်ရောက်ပြီးသူဖျော်ဖြေရေးခံစားရန်အသုံးပြုသောအရာကိုကိရိယာ,သင်သည်ဤဂိမ်းကစားနိုင်ပါလိမ့်မည်။ သူတို့ကသင့်ရဲ့ဘရောက်ဇာကိုတိုက်ရိုက်အလုပ်လုပ်နှငျ့သငျတူသောတိုးချဲ့မှုသို့မဟုတ်ဘာမှမဆိုကြင်နာတပ်ဆင်ရန်မလိုအပ်ပါဘူး။ အကယ်၍သင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုဒ်တွင်ပျော်စရာအချို့ရှိလိုပါကသင်လုပ်ရမည့်အရာအားလုံးသည်ဂိမ်းပေါ်ရှိကစားခလုတ်များကိုစတင်ထိရန်ဖြစ်သည်။, ဤဆိုဒ်တွင်ကန့်သတ်ချက်မရှိပါ၊သင်ဂိမ်းကစားရန်အသက် ၁၈ နှစ်ရှိရန်လိုအပ်သည်ဟူသောအချက်ထက်အခြားဖြစ်သည်။
သင်တို့သည်ငါတို့၏ဆိုက်အပေါ်ရသောအခါ,သငျသညျကွဲပြားခြားနားသောဂိမ်းစတိုင်များအတွက်ကယ်နှုတ်တော်မူ၏စိတ်ကူးယဉ်နှစ်သက်နိုင်သည့်မှတဆင့်ကွဲပြားခြားနားသောရွေးချယ်စရာရှိသည်။ သာလိင်နှင့်စပ်လျဉ်းသောစိတ်ကူးယဉ်များအတွက်၊သင်ကြိုးစားချင်ရာထူးသို့မဟုတ်ယောက်ျားကဲ့သို့၊သင်လိင်ကိုက်ရ။ လိင်တံထောင်မတ်ခြင်းတွင်အရာအားလုံးသည်သင်၏လုပ်ဆောင်ချက်တွင်မိမိကိုယ်ကိုနှစ်မြှုပ်ခြင်းနှင့်သင်၏ဒစ်စို့ခြင်းသို့မဟုတ်တင်းကျပ်စွာမြည်းခြင်းဂိမ်းတွင်တစ်ဦးတည်းနေသကဲ့သို့ခံစားရခြင်း၌ပျော်မွေ့သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်,ဤသူစိတ်ကြိုက်၏အမြင့်ဆုံးဒီဂရီနှင့်အတူဂိမ်းဖြစ်ကြ၏,သငျသညျလူတို့သညျ၏ရှုထောင့်ကိုပြောင်းလဲနိုင်သောအဓိပ်ပာယျ.
ငါတို့သည်လည်းအပြန်အလှန်ရုံလိင်ထက်ပိုသောအတွက်ဂိမ်းတွေနဲ့လာကြ၏။ အဆိုပါဂိမ်းကိုသင်လိင်မှတပါးလုပ်ဖို့အခြားအမှုအရာတွေအများကြီးနှင့်အတူနိုင်ပါလိမ့်မည်မျိုးစုံဇာတ်ကောင်နှင့်အတူလာမယ့်နေကြသည်။ ကျနော်တို့ဆိုက်အပေါ်လိင်တူချစ်သူချိန်းတွေ့ခကျြမြား၊အရာသင်ယောက်ျားအမျိုးမျိုးနှင့်အတူချိန်းတွေ့ပျော်မွေ့ကြလိမ့်မည်ဟုအချို့သောအံ့သြဖွယ်ဂိမ်းနှင့်အတူလာမယ့်နေကြသည်။ သင်ပင်ဆက်ဆံရေးကိုစတင်ရန်နှင့်ဤဂိမ်းများတွင်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအပေါ်ခိုးချနိုင်ပါတယ်။
ငါတို့သည်ပင်သင်အချိန်ကိုသတ်ခြင်းနှင့်ပဟေဠိများနှင့်လောင်းကစားရုံပျော်စရာနှင့်အတူဖျော်ဖြေမှုကိုသင်စောင့်ရှောက်ကူညီနိုင်လိမ့်မည်ဟုအချို့သောဂိမ်းရှိသည်။ ဤဂိမ်းများတွင်အားလုံးသင့်ရဲ့အနိုင်ပေးတိုးတက်လာတာနဲ့အယုတ်အကြောင်းအရာအမျိုးမျိုးနှင့်အတူဆုခခြဲ့ပါလိမ့်မည်။ ဆိုက်ပေါ်တွင်ရှာဖွေတွေ့ရှိခံရဖို့အများကြီးပိုရှိပါတယ်,ရုံရှာဖွေစူးစမ်းစတင်.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ပေါ်မှာဤမျှလောက်များစွာသောဂိမ်းဖြစ်ကြပြီးသင်ပေးဆောင်သို့မဟုတ်ပင်ဆိုက်ပေါ်တွင်မှတ်ပုံတင်မရှိဘဲထိုသူအပေါင်းတို့သည်ပျော်မွေ့နိုင်ပါ။ ကျနော်တို့အခမဲ့အကြောင်းအရာလည်းအရည်အသွေးတွေအများကြီးနှင့်အတူကြွလာဘယ်မှာအနည်းငယ်ပွင့်လင်းညစ်ညမ်းဂိမ်းဆိုဒ်များတဝတည်းဖြစ်ကြ၏။ အရင်ကအခမဲ့ဆိုဒ်များပေါ်တွင်ရရှိနိုင်ဖူးဘူးဒီနေရာမှာဂိမ်းရှိပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပုံမှန်ဤစုဆောင်းမှုအသစ်ခေါင်းစဉ်များကိုထည့်သွင်းစောင့်ရှောက်သည်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်ဂိမ်းများကိုပူဇော်သောပေါ်တွင်ဆိုက်ကိုလည်းယနေ့အထိတက်သည်နှင့်သင်အလွယ်တကူစုဆောင်းမှုမှတဆင့်သွားကူညီရန်ကြည့်ရှုကိရိယာများနှင့်တကွကြွလာ။, သင်သည်အခြားကစားသမားတွေနဲ့အပြန်အလှန်ထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့ခံစားနိုင်ပါလိမ့်မည်ဒါကြောင့်ကျနော်တို့တောင်မှဆိုက်ပေါ်တွင်အသိုင်းအဝိုင်းအင်္ဂါရပ်များနှင့်အတူလာ။ အခမဲ့လိင်တူချစ်သူညစ်ညမ်းဂိမ်းကိုတွေ့ကြုံခံစားယနေ့ညအလှတရား!